UCharles Dickens. Indoda eyasungula ukhisimusi. | Izincwadi Zamanje
UCharles Dickens. Indoda eyasungula ukhisimusi.
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Abalobi, Amabhuku, I-Novela
Ake sibhekane nakho. UKhisimusi ngaphandle kukaCharles Dickens akuyona uKhisimusi noma yini. UKhisimusi ngaphandle kwakhe mr scrooge, umlingani wakhe UJakob marley, umshana wakhe oziphethe kahle, owesule emsebenzini UBob Cratchit futhi ngaphandle kwakhe isikhathi esincane akuwona ukhisimusi. Futhi ngaphandle kwezipoki zeKhisimusi Esidlule, Zamanje Nezesikhathi Esizayo. Awukho uKhisimusi ngaphandle kwakhe UKhisimusi Tale yalo mbhali waseNgilandi, omunye wezincwadi ezinkulu emhlabeni, hhayi iSaxon kuphela.
Ikhishwe ibhayisikobho entsha mayelana nesibalo sakhe futhi wayakha kanjani indaba yakhe engafi noma, ngaphandle kokungabaza, ithandwa kakhulu. Indoda eyasungula ukhisimusi Kudlala uDan Stevens, uChristopher Plummer noJonathan Pryce nabanye. Futhi uchungechunge lwe-umpteenth i-BBC (yebo) olulungiselele lezi zinsuku nalo lusalindile. Sinikeza ithuba elilodwa kulokhu okubalulekile nale nguqulo entsha yefilimu yokukhulelwa kwakhe.
3 Umbukiso eLondon. Isipoki somqondo: ukuthola uCarol kaKhisimusi.
Impela uDickens Akazange asungule uKhisimusi, kodwa ngale ndaba wakwazi ukuyibuyisela kabusha noma ukuyithola kabusha. Umake noma wazi ukuthi angaludlulisa kanjani futhi aluchaze lonke uchungechunge lwezinkolelo-ze, amasiko noma amasethingi asunguliwe noma enziwa abonga imfashini kuye.
Kubhaliwe UKhisimusi Tale kulungile ngaphambi kukaKhisimusi 1843 futhi kuyo wayefuna ukuthatha izinkumbulo zakhe eningizimu-mpumalanga yeNgilandi. Lapho, endaweni yasemakhaya lapho akhulela khona, kwakukhona upiyano lapho kwakudlalwa khona izingoma zikaKhisimusi futhi umama wakhe epheka i-turkey esikhundleni sehansi. Kuyathakazelisa nokuthi likhithika kakhulu lapho ubusika bebuvamise ukuba mnene. Futhi lelo qhwa, elikhona yonke indawo emlandweni, selivele lizoba yinto ebalulekile kwezinye izindaba ezizoshicilelwa kamuva.
UKhisimusi Tale futhi ukugxekwa emphakathini kusuka kuDickens kuya esimeni esinzima ahlangabezana naso ohambweni oluya eManchester, lapho abona khona ubunzima besigaba sabasebenzi. Kwaqala njenge yokubika ikakhulukazi ukuhlukunyezwa kokuxhashazwa kwezingane. Futhi yagcina iyindaba enengqikithi, imizwa nemizwa yayo esesekhona kakhulu ngemuva kweminyaka eyi-170.
Impumelelo yenoveli yashesha futhi ezinkulu kakhulu futhi zathengiswa Amakhophi we-6.000 evikini lokuqala. UDickens wayazi ukuthi angaxhumana kanjani nezinkulungwane zalezo zakhamizi, njengaye, ezikhumbula ngeKhisimusi elula uKhisimusi, kude nezimboni, izitimela zesitimu, ukungcola kanye nezimo zokuphila ezimbi.
Ikhishwe e-United States nase-United Kingdom, kepha lapha akwaziwa ukuthi izofika nini noma nini. Lokhu ngokususelwa encwadini kaLee Standiford isihloko somuntu ongaziwa. Xoxa le ndaba ngokuthinta imilingo ayekugqokile ekudalweni kwe-Ebenezer Scrooge (UChristopher Plummer), uTim omncane nabanye abalingiswa bakudala be- UKhisimusi Tale.
Bekungamasonto ayisithupha lapho umbhali edlule kokubalulekile Bump emsebenzini wakhe ngemuva kokwehluleka kwamanoveli akhe amathathu okugcina, nabashicileli abakhulu bawenqaba umbono wakhe wendaba ebekwe ngoKhisimusi. Kuqondiswa ngu I-Bharat nalluri futhi usikhombisa ukuthi uDickens (Dan Stevens) ugqozi lokuphila kwangempela nomcabango wakhe ocacile kakhulu ukuguqula lezo zinhlamvu ezingasoze zalibaleka kanye nenganekwane esivele ingaphelelwa yisikhathi.
UCharles Dickens - UDan Stevens
Ebenezer Scrooge - UChristopher Plummer
UJohn Dickens - Jonathan uPryce
UJakob Marley - UDonald Sumpter
UKate Dickens - UMorfydd Clark
Umbukiso eLondon. Isipoki somqondo: ukuthola indaba kaKhisimusi.
Umbukiso wethuliwe e- 48 Doughty Street enkabeni yeBloomsbury eLondon. Bekuyi Ikhaya lomndeni wokuqala likaDickens, owathuthela lapho ngo-1837 nomkakhe uCatherine nengane yabo yokuqala. Ngaleso sikhathi wayeyintatheli esebenzisa igama mbumbulu elithi Boz.
Kule ndlu yomnyuziyamu ihlangana iqoqo elikhulu lezinto nezinto zomuntu uqobo zombhali wenoveli nomndeni wakhe futhi iyaqhubeka nokwandisa izitolo ngoba asikho isikhala esanele sokubonisa konke. Kubuye kuboniswe imvunulo ehlukahlukene esetshenziswe ngabalingisi kule filimu. Umbukiso uzoba se-kuvulwe kuze kube nguFebhuwari 25, 2018. Esinye isizathu sokuvakashela eLondon.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UCharles Dickens. Indoda eyasungula ukhisimusi.
UJessica Arce kusho
Ngabe uyazi nganoma iyiphi indlela ukuthi le movie yayivele inikezwe yini eLatin America? Bengilinde le movie kusukela ngonyaka odlule. Engithanda ukukubona kakhulu ngoKhisimusi yizinhlobo ezahlukahlukene ezikhishwe kule ndaba emnandi, eyokuqala engayibona kwakuyinguqulo yeLooney Toons futhi engikuthanda kakhulu kulapho uBill Murray enza khona.
Phendula uJessica Arce
Uthi bewazi...? UKhisimusi nezincwadi ...
Izincwadi ezintsha eziyi-6 zobugebengu zango-2018